Friday, 13 December 2019 11:52
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ခွန် ရောင်းခွန် ဘယ်လိုဆောင်မလဲ
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အိမ်နှင့်မြေ(ဂရန်မြေ) ဝယ်လိုက်သောကြောင့် ဝယ်ခွန်ရောင်းခွန် မည်သို့ ထမ်းဆောင်ရပါသလဲဟု မေးလာ သဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ဗဟု သုတအဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။
Thursday, 12 December 2019 14:28
အလောင်းတော်ကဿပ ကားလမ်း ယခုလအတွင်း ဖွင့်မည်
အလောင်းတော်ကဿပ ကားလမ်းကို ယခုလ ၂၀ ခန့်တွင် စတင်သွားလာခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလောင်းတော် ကဿပဂေါပကအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။
Wednesday, 11 December 2019 15:04
အိမ်၊ခြံ၊မြေ ဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် တောင်းယူရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်. အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးခိုင်မာမှုရှိအောင် တောင်းယူရမယ့် စာရွက်စာတမ်းတချို့ကို မဖြစ်မနေ တောင်းယူသင့်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့အခါ ရောင်းသူနဲ့ပွဲစားတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကိုသာ ဝယ်သူတွေက ယုံကြည်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးစိတ်ချနိုင်အောင် လုပ်သင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ စရန်ပေးရင် ပိုင်ဆိုင်မှု မိတ္တူတောင်းပါ။ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ မြေနဲ့တိုက်ခန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ မှန်ကန်အောင် ပြည့်စုံအောင် သေချာမသိကြဘူး။ ဈေးတန်ရင် ဈေးဆစ်ဝယ်ကြတာပါပဲ။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်မြေကို ဝယ်မယ့်တိုက်ခန်းစာရွက် စာတမ်းတွေကလည်း စရန်မြေပေး စာချုပ်ချုပ်တော့မှ ထုတ်ပြကြတာပါ။ တစ်ခါတရံရောင်းသူတွေက ကျန်ငွေချေတဲ့အခါမှသာ မူရင်းပေးမယ်လို့ ပြောတတ်ကြပြီး ဒါတွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းကျွမ်းကျင်သူ ဝယ်သူတော်တော်များများက စရန်ပေး စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါ ရှေ့နေခေါ်ဖို့ မလိုဘူးထင်ပြီး ပွဲစားတွေ ယူလာတဲ့ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွေ တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တွေနဲ့ပဲ စရန်ငွေပေးပြီး စလွယ်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဝယ်တဲ့အခါ ခိုင်မာအောင် စာရွက်စာတမ်း ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ခေါ်ယူသင့်ပါတယ်။ ရောင်းသူထံက တောင်းယူမယ့် စာရွက်စာတမ်း ကန်ထရိုက်ထံက တိုက်ခန်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူတဲ့အခါ မြေရှင်နဲ့ ကန်ထရိုက်တို့ အခန်းအပေးအယူ သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ကတိစာချုပ် (မိတ္တူ)၊ ရောင်းသူနဲ့ကျန် ကန်ထရိုက်တာနှစ်ဦး အခန်းခွဲဝေတဲ့ သဘောတူစာချုပ်(မူရင်း)၊ BCC လူနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် (မိတ္တူ)တွေကို ရောင်းသူထံက တောင်းယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးမှ ရောင်းသူထံက မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနဲ့ အိမ်ထောင်စု စာရင်းမိတ္တူ တောင်းယူသင့်ပါတယ်။ တိုက်ခန်း အပြီးအပိုင် ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သက်သေခံ အထောက်အထား ရထားဖို့အတွက် ကန့်ကွက်တာတွေ ရှိမရှိ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာသင့်ပါတယ်။ ခုနစ်ရက်ပြည့်လို့ ကန့်ကွက်သူမရှိမှ အပြီးအပိုင် စာချုပ်ချုပ်သင့်ပါတယ်။ မြေရှင်လက်မှတ်ယူပါ။ တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ပြီး အခွန်မဆောင်ရင်တော့ မိမိဝယ်တဲ့တိုက်ခန်းနဲ့ မြေရှင်လက်မှတ်ယူသင့်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး မြေရှင်လက်မှတ်ထိုးခအဖြစ် မြေနဲ့အိမ်တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ရာခိုင်နှုန်း ပေးရပါတယ်။ မြေရှင်လက်မှတ် ထိုးပေးတဲ့အတွက် အရောင်းအဝယ် ကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Myanmar Builders Guide ---Zawgyi--- အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေတာင္းယူရမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္. အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့အခါ ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ပိုၿပီးခိုင္မာမႈရွိေအာင္ ေတာင္းယူရမယ့္ စာ႐ြက္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို မျဖစ္မေန ေတာင္းယူသင့္ပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ လုပ္တဲ့အခါ ေရာင္းသူနဲ႔ပြဲစားေတြရဲ႕ ေျပာစကားေတြကိုသာ ဝယ္သူေတြက ယုံၾကည္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ လုပ္တဲ့အခါ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ႏိုင္ေအာင္ လုပ္သင့္တာေတြ ရွိပါတယ္။ စရန္ေပးရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ မိတၱဴေတာင္းပါ။ ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ေျမနဲ႔တိုက္ခန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ မွန္ကန္ေအာင္ ျပည့္စုံေအာင္ ေသခ်ာမသိၾကဘူး။ ေဈးတန္ရင္ ေဈးဆစ္ဝယ္ၾကတာပါပဲ။ ကိုယ္ဝယ္မယ့္ေျမကို ဝယ္မယ့္တိုက္ခန္းစာ႐ြက္ စာတမ္းေတြကလည္း စရန္ေျမေပး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မွ ထုတ္ျပၾကတာပါ။ တစ္ခါတရံေရာင္းသူေတြက က်န္ေငြေခ်တဲ့အခါမွသာ မူရင္းေပးမယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကၿပီး ဒါေတြကို သတိထားသင့္ပါတယ္။ စာ႐ြက္စာတမ္းကြၽမ္းက်င္သူ ဝယ္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စရန္ေပး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ေရွ႕ေနေခၚဖို႔ မလိုဘူးထင္ၿပီး ပြဲစားေတြ ယူလာတဲ့ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ေတြ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ပဲ စရန္ေငြေပးၿပီး စလြယ္လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဝယ္တဲ့အခါ ခိုင္မာေအာင္ စာ႐ြက္စာတမ္း ကြၽမ္းက်င္သူေတြကို ေခၚယူသင့္ပါတယ္။ ေရာင္းသူထံက ေတာင္းယူမယ့္ စာ႐ြက္စာတမ္း ကန္ထ႐ိုက္ထံက တိုက္ခန္း တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူတဲ့အခါ ေျမရွင္နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္တို႔ အခန္းအေပးအယူ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ကတိစာခ်ဳပ္ (မိတၱဴ)၊ ေရာင္းသူနဲ႔က်န္ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွစ္ဦး အခန္းခြဲေဝတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(မူရင္း)၊ BCC လူေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ (မိတၱဴ)ေတြကို ေရာင္းသူထံက ေတာင္းယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ေရာင္းသူထံက မွတ္ပုံတင္မိတၱဴနဲ႔ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမိတၱဴ ေတာင္းယူသင့္ပါတယ္။ တိုက္ခန္း အၿပီးအပိုင္ ဝယ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား ရထားဖို႔အတြက္ ကန႔္ကြက္တာေတြ ရွိမရွိ သတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာသင့္ပါတယ္။ ခုနစ္ရက္ျပည့္လို႔ ကန႔္ကြက္သူမရွိမွ အၿပီးအပိုင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သင့္ပါတယ္။ ေျမရွင္လက္မွတ္ယူပါ။ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ၿပီး အခြန္မေဆာင္ရင္ေတာ့ မိမိဝယ္တဲ့တိုက္ခန္းနဲ႔ ေျမရွင္လက္မွတ္ယူသင့္ပါတယ္။ အရင္ဆုံး ေျမရွင္လက္မွတ္ထိုးခအျဖစ္ ေျမနဲ႔အိမ္တန္ဖိုးေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရပါတယ္။ ေျမရွင္လက္မွတ္ ထိုးေပးတဲ့အတြက္ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
Tuesday, 10 December 2019 14:30
လာမည့်လေးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂) ဘီလီယံအထိ အသုံးပြုနိုင်ရန် လျာထားတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် မြန်မာနိုင်ငံရုံး၏ သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးကျော်စိုးလင်းက ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
Tuesday, 10 December 2019 10:36
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ရမကောင်းဆုံးမြို့စာရင်း၌ ရန်ကုန်ပါဝင်နေခြင်းမှာ ရှက်စရာမဟုတ်ဟု မြို့တော်ဝန်ဆို
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင် ရမကောင်းဆုံးမြို့စာရင်း၌ ရန် ကုန်ပါဝင်နေခြင်းသည် ရှက်စရာ မဟုတ်ဟု မြို့တော်ဝန်ဦးမောင် မောင်စိုးက ပြောသည်။
Forbes က ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့နေထိုင်ရန် အဆိုးရွားဆုံး ၁၀ မြို့စာရင်း၌ ရန်ကုန်မြို့ ပါဝင်
Forbes က ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့နေထိုင်ရန် အဆိုးရွားဆုံး ၁၀ မြို့စာရင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရန်ကုန်မြို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ေျမေနရာလက္ဝယ္မရေသး၍ က်ိဳင္းတုံ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါမေခၚႏိုင္ေသး
က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ရမည့္ ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲစက္႐ုံအတြက္ ေျမေနရာလက္ဝယ္မရေသးသည့္အတြက္
Wednesday, 04 December 2019 10:22
ဘဏ္ဍာနှစ်သစ် ပထမဆုံးလတွင် အခွန်ဝင်ငွေ ကျပ်ဘီလီယံ ၅၄၀ ကျော် ရရှိ
အစိုးရက အသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်သုံးစွဲရန် လျာထားသည့် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမဆုံး လတွင် အခွန်ဝင်ငွေ ကျပ် ၅၄၃ဘီလီယံကျော် ကောက်ခံရရှိ ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၂၈၈ ဘီလီယံကျော်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၁၀၇ ဘီလီယံကျော်၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၁၂၉ ဘီလီယံကျော်၊ ရတနာခွန်ကျပ် ၃၅၉သန်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ်ငါး ဘီလီယံကျော်နှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ကျပ် ၁၂ ဘီလီယံကျော်ကို အောက်တိုဘာ တစ်လအတွင်း ကောက်ခံရရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အစိုးရဘတ်ဂျက်တွင် အခွန်ကောက်ခံမှုမှ ဝင်ငွေစုစုပေါင်း ကျပ် ဘီလီယံ၇,၈၀၀ ကျော် ရရှိမည်ဟု လျာထားသည်။ ဟန်းဆက်များမှ အခွန်ကောက်ခံမှု တိုးမြင့်လာနိုင်ခြင်း၊ အခွန်ဖြေလျှော့မှု၊ စီးကရက်၊အရက်အခွန်များ တိုးမြှင့်ထားခြင်းကြောင့် ကောက်ခံရရှိမည့် အခွန်ငွေပမာဏကို လွှတ်တော်က တိုးမြှင့်လျာထားသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ စစ်တမ်းတွင် အစိုးရ၏ ဝင်ငွေပိုင်း၌ အခွန်အကောက်မှ ရနိုင်မည့် ပမာဏကို ၃၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အစိုးရဘတ်ဂျက်တွင် ဝင်ငွေကျပ် ဘီလီယံ ၂၆,၀၀၀ ကျော် ရရှိမည်ဟု လျာထားသည်။ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာနှစ်စတွင်ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် များ အခွန်ထမ်းဆောင်မှု လျော့နည်းလေ့ရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီအမြတ်ခွန်ကဲ့သို့ အခွန်အမျိုးအစားများက ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်၌ ထမ်းဆောင်မှုများ လေ့ရှိကြောင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အချို့က ပြောသည်။ ထို့အပြင် ဝင်ငွေခွန် အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည့် အိမ်ခြံမြေ အပါအဝင် အခြေပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲရာတွင် ပေးဆောင်ရသော ကျပ်သိန်း ၁,၀၀၀ အောက် အခွန် ၃ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း နိုဝင်ဘာမှ စတင်ပေးဆောင်ခွင့်ရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေး မှူး ဦးမျိုးမြင့်က ပြောသည်။ Source-7Day Daily Myanmar Builders Guide ---Zawgyi--- အစိုးရက အသုံးစရိတ္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ပထမဆုံးလတြင္ အခြန္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၅၄၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၂၈၈ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ က်ပ္ ၁၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ရတနာခြန္က်ပ္ ၃၅၉သန္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ က်ပ္ငါး ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ က်ပ္ ၁၂ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ေအာက္တိုဘာ တစ္လအတြင္း ေကာက္ခံရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ေက်ာ္၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္သံုးစြဲႏိုင္မည့္ ဆိုလာဓာတ္အားေပးစနစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ဘီလီယံ၇,၈၀၀ ေက်ာ္ ရရွိမည္ဟု လ်ာထားသည္။ ဟန္းဆက္မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံမႈ တိုးျမင့္လာႏိုင္ျခင္း၊ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈ၊ စီးကရက္၊အရက္အခြန္မ်ား တိုးျမႇင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံရရွိမည့္ အခြန္ေငြပမာဏကို လႊတ္ေတာ္က တိုးျမႇင့္လ်ာထားသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ စစ္တမ္းတြင္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြပိုင္း၌ အခြန္အေကာက္မွ ရႏိုင္မည့္ ပမာဏကို ၃၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္တြင္ ဝင္ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိမည္ဟု လ်ာထားသည္။ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္စတြင္ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအျမတ္ခြန္ကဲ့သို႔ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားက ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္၌ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ေလ့ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္က ေျမကြက္မ်ားကိုေရာင္းရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ကခ်မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား ဝယ္ယူဖို႔ အခက္အခဲရွိ ထို႔အျပင္ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ အပါအဝင္ အေျခပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ေအာက္ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ႏိုဝင္ဘာမွ စတင္ေပးေဆာင္ခြင့္ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရး မႉး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။
အခွန်သက်သာခွင့်ပေးသော်လည်း အိမ်၊ မြေနှင့် တိုက်ခန်းဝယ်လိုအား တက်မလာသေးဟုဆို
အခွန်ဖြေလျှော့မှု နှစ်လ သက်တမ်းသို့ ရောက်ရှိလာသော် လည်း ပြည်တွင်းအိမ်ခြံမြေ၊ တိုက် ခန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ တွင် ဝယ်လိုအား သိသာစွာ တိုးတက်မှုမရှိသေးကြောင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကပြောသည်။
Myanmar Cluster Co., Ltd.